Ravalomanana : vonona hiara-kiasa amin’ny fitondrana | NewsMada
Nanamafy ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc fa mitsodrano ireo minisitra roa ao anatin’ny governemanta teo aloha, hanohy ny andraikiny amin’izao governemanta vaovao izao. Antony, efa hita ny vokatra vitan’ireo minisitra avy amin’ny antoko Tim ireo amin’ny hampandrosoana ny firenena.
Nanamafy izany rahateo ny minisitry ny Fambolena, Ravatomanga Roland, fa hitsinjo ny vahoaka maro an’isa ny fanamby nataony hatramin’izay, nampivoarana ny lafim-piainan’izy ireo, fa tsy miditra amin’ny lafiny adilahy politika velively.
Manamarina izany koa ny fanehoan-kevitry ny vondrona iraisam-pirenena, toy ny masoivohon’i Frantsa sy ny solontenan’ny Vondrona eoropeanina miasa eto amintsika, nandritra ny famindram-pahefana ny 13 avrily teo, teny Mahazoarivo. Tohanan’izy ireo ny tetikasan’ny fanjakana hijery ny fampivoarana ny fiainam-bahoaka, ny lafiny sosialy sy ny toekarena ary ny fandriampahalemana, ohatra.